thinzar's blog: June 2011
Labels: android, posts in english
Flashing FroydVillain ROM 1.7.0 on my HTC Hero
The news that HTC is not releasing an official Froyo update for Hero is very disappointing. Hero’s internal memory is only 256MB and not being able to install apps on the SD card is the biggest drawback. Android OS and HTC Sense UI itself have already consumed two thirds of its internal memory, and left the user very limited space to install other apps.
I’m not good at writingatutorial, this is just to jot down the steps I’ve done to flash the FroydVillain ROM. Maybe it might someday be useful forasad Hero user like me who’s desparate enough to flashanew ROM. Everybody device can faceadifferent problem, so read together with:
• [Complete Guide]: How To Flash A Custom ROM To Your Android Phone With ROM Manager + Full Backup & Restore
• [Youtube] How to get Android 2.2 (Froyo) on HTC Hero
Rooting has becomealot painless and easier with the emergence of “one-click root”. I used Unsiversal Androot, just one-click and it’s done.
Contacts: Sync Google contacts. Export Phone contacts to SD card.
SMS: downloaded and installed SMSBackup and Restoreapp from Market and exported to SD card
Calendar: Sync with Google
Apps: Sync with appBrain. Though this won’t sync back to your phone, it’s an easy to remember the apps that you used to install. Other people suggested to use apps like Titanium Backup to backup all the apps, I simply don’t think it’s necessary for me, since I don’t have much apps installed on my device anyway.
3. Search forasuitable ROM
I don’t have any confidence to flashanew ROM until I found the FroydVillain. A perfect Froyo ROM for HTC Hero. Downloaded it and saved it to the root folder of the SD card.
4. Flash Recovery Image (using ROM Manager)
This step becomesalot handy with ROM Manager, download it from Market. “Backup Current ROM” first. Then “Flash ClockWorkMod Recovery”. After that, click “Reboot into Recovery”. (If this works, go to step 5.)
This is where I got stuck forafew days, whenever I reboot into recovery,ared exclaimation mark insideatriangle appears and it just stucks there till I take out my battery and reboot. At last, I found out that some versions of ClockWorkMod Recovery hasalot of issues. So, I go back to ROM Manager, and choose “Flash Alternate Recovery”, and I choose to install "Amon-Ra Recovery Image".(don't worry, ROM manager will handle this for you.) [Refer screenshots here]
5. Wiping data
After the phone reboot, select Wipe. Then “wipe data/factory reset” and “wipe delvik cache”. Everybody warned that skipping this step can cause an endless loop with bootloader, so be careful. [Refer to this youtube video]
6. Flashing the ROM
After all those above steps, flashinganew ROM has never been so easy. Just go back to the menu, select “Flash zip from sd card”. [Refer to this youtube video] The phone will reboot. (I got stuck again at the VillainROM wallpaper for about5minutes. Make me too shocked, but luckily simply rebooting solves the problem)
Ta da.. At last, I got Froyo on my device and frees up about 170MB of internal memory.
Well, that’s the end of my attempt, first thing I felt? I missed my HTC Sense :( , now I have to acknowledged how the SenseUI has been beautifully designed. Anyway, with FroydVillain, I have freed up lots of memory and can get all my favorite applications back, there is big room for customization and it becomealot faster.
A satisfactory day at MMR Embassy
အရင်ကတော့ မြန်မာ သံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်တာ ပါတ်စ်ပို့ သက်တမ်းတိုးရတာ အိပ်မက်ဆိုးကြီး တစ်ခုလိုပါဘဲ။ သံရုံးက ပြန်လာတိုင်း မရိုးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေ ပြောဖို့ ပုံပြင်တစ်ခုတော့ ပြန်ပါလာတတ်ကြတယ်။ အများအားဖြင့် သံရုံးသွားတိုင်း မကျေမနပ်နဲ့ ပြန်လာရတာများပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ တော်တော် အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆို အမြဲသာ ဒီလိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ၄လတစ်ခါလောက် စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း အခွန်သွားဆောင်မိနိုင်တယ်။ :D
သောကြာနေ့က ပါတ်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးဖို့ ကေအယ်လ် မြန်မာသံရုံးကို တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တယ်။ မနက် ၉နာရီ ၁၅လောက်ရောက်တော့ သံရုံးကောင်တာမဖွင့်သေးပေမယ့် လူတော်တော်များများတော့ ရောက်နေကြပြီ။ ရောက်ရောက်ချင်း ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာကိုသွား ရင်းဂစ် ၁၂ကျပ်ပေးပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်၊ ပြီးတော့ နံပါတ်စဉ်တပ်ထားတဲ့ ဖောင်တစ်ခုပေးတယ်။ ကိုယ့်နံပါတ်က ၅၄။ သံရုံးမဖွင့်သေးတော့ ခဏထိုင်စောင့်တယ်။ သံရုံးဝင်းထဲမှာ အမိုးလုပ်ထားပေးပြီး ထိုင်ခုံတွေ အများကြီး ချထားပေးတယ်။ အဲကွန်းတွေ ဘာတွေနဲ့ အခန်းကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ခါတိုင်းလို မတ်တပ်ရပ်မစောင့်ရတော့တာကိုဘဲ (အလွန့်အလွန်) ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ၁၀နာရီထိုးခါနီးတော့ ကောင်တာတွေ စဖွင့်တယ်။ အမှတ်စဉ်အလိုက် နံပါတ်ခေါ် ပြီးရင် ကောင်တာအလိုက် တန်းစီပေါ့။ ၁၀ယောက်တစ်ခါခေါ်တယ်။ နံပါတ်ခေါ်ရင် ကောင်တာသွား တန်းစီ၊ အခွန်ဘယ်လောက် ဆောင်ရမလဲဆိုတာ သူတို့ တွက်ပေးပါတယ်။ ပြီးရင် စာအုပ်အသစ်ဖိုး ၃၅၀နဲ့အတူ ဘဏ်မှာ ငွေသွားသွင်းပါတယ်။ ဘဏ်ကနေ Bank Slip ယူပြီးပြန်လာရင် သံရုံးမှာ တစ်ခါ ပြန်တန်းစီပါတယ်။ အရင်အခေါက်တွေတုန်းကလို တိုးတာ ဝှေ့တာတွေ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ (တန်းစီတယ်ဆိုတာ အရှေ့ကနေ ဝင်စီသလား အနောက်ကနေ စီရသလား မသိတဲ့ တစ်ချို့ တစ်ချို့သောသူတွေက လွဲရင်ပေါ့လေ။) ကောင်တာ ၁ မှာ ဘဏ်ဖြတ်ပိုင်းပေးပြီး ကောင်တာ၂မှာ လက်ဗွေနဲ့ ထိုးမြဲလက်မှတ်ကို စက်နဲ့မှတ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ညနေ ၄နာရီခွဲမှာ စာအုပ်ပြန်လာယူခိုင်းပါတယ်။ ပထမဆုံးပေးတဲ့ဖောင်မှာ လေးကြောင်းလောက် ရေးရတာကလွဲရင် ဘာဖောင်မှထပ် မဖြည့်ရဘဲ ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့အတွက် ဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင် သံသယ ဖြစ်မိသေးတယ်။
ဒါကတော့ သံရုံးမှာ လုပ်ထားပေးတဲ့ အမိုးအောက်မှာ ထိုင်ခုံနဲ့ ထိုင်စောင့်နေတုန်း ရိုက်ထားတာ။ ကောင်တာတွေ ရှေ့မှာ မှန်တစ်ချပ် ချိတ်ထားတာ ထူးဆန်းလို့။ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခန်းနဲ့က တော်တော်လှမ်းတယ်။ မှန်ကိုဒီမှာထားတာ ဘာလုပ်ဖို့လဲမသိဘူး။ ကောင်တာမရောက်ခင် မှန်ကြည့်ပြီး အပြုံးလေ့ကျင့်ဖို့ထင်တယ်။ :D
နံပါတ် ၅၄ ဆိုလို့ နေ့တစ်ဝက်လောက်များ စောင့်ရမလားလို့။ ခဏလေး နာရီဝက်လောက်နဲ့ ကိုယ့်အလှည့် ရောက်လာတယ်။ သံရုံးသွားဖို့ ရက်ရွေးတာ မှန်သွားတယ်ထင်တယ် ;-) ဖေဖော်ဝါရီလောက်တုန်းက အခွန်သွားဆောင်တုန်းကနဲ့များ တစ်ခြားစီ။ အဲတုန်းက အခွန်လေး ဆောင်ဖို့အရေး တိုးလိုက်ရတာ သေမတတ်။ အခွန်ဘဲဆောင်မယ် သက်တမ်းတိုးဖို့ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်ကောင်တာမှ စီရမလဲဆိုတာလည်း ဘယ်သူ့သွားမေးရမှန်းမသိ။ စီချင်တဲ့အတန်းထဲ ဝင်စီလိုက်တော့လည်း လစ်တာနဲ့ ကြားဖြတ်ဝင်ဖို့ ချောင်းနေတဲ့ သူတွေကလဲ မနည်းဘူး။ ကောင်တာတစ်ခုအရှေ့မှာ တန်းစီနေတာ စီနေရင်း ၂တန်း ဖြစ်သွားတာကလည်း ရှိသေးတယ်။ ဘေးနားက နည်းနည်း ခပ်စွာစွာ အမကြီးတွေ ဝင်ပြောတော့မှ ဘေးနာက ရောက်လာတဲ့ တစ်တန်းက အနောက်ပြန်သွားစီတော့တယ်။ လူလဲ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ၂နာရီလောက် တန်းစီလိုက်ရတယ်။
မနေ့ကတော့ သောကြာနေ့ ဖြစ်နေလို့လား။ School Holiday မလို့လား။ သံရုံးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ပိုစနစ်ကျပြီး မြန်ဆန်လာလို့လား။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံကုန် လူပန်းတာနဲ့စာရင် ဒီတစ်ခေါက်လိုမျိုး စနစ်တကျ အေးအေးဆေးဆေးလေး ပြီးသွားတာကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ညနေရောက်တော့ တစ်ခါပြန်သွား စာအုပ်ယူ၊ နာမည် မှန်လားစစ်ပြီး ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ The Republic of the Union of Myanmar (TROTUM) ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ပါတ်စ်ပို့အသစ် လက်ဝယ်ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။
ခါတိုင်းဆို တိုးရဝှေ့ရ၊ အအော် အငေါက် အရစ်ခံရဆိုရင် သံရုံးသွားရတာ တစ်စက်မှ စိတ်မချမ်းသာပါဘူး။ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ အလုပ်အပျက်ခံပြီး အဝေးကြီးကနေ တကူးတက လာရတဲ့အတွက် ဒီလို အဆင်ပြေပြေအေးအေးဆေးဆေး ပြီးသွားတော့ အရမ်းကို ကျေနပ်မိပါတယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ခဏခဏ ပျော်ရတယ်။ မီးလာလဲပျော်ရ သံရုံးမှာ မတိုးရလဲ ပျော်ရတာဘဲပေါ့။) သံရုံးမှာ အခွန်ဆောင်ခဲ့သမျှထဲမှာ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပေးခဲ့မိပါတယ်။
P.S သံရုံးလိပ်စာမသိရင် ဒီပို့မှာ တစ်ခေါက်ရေးဖူးပါတယ်။ (Myanmar Embassy Malaysia)